Umsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yomusa wadonsa iminyaka eyizi-2,000, futhi kuzothatha isikhathi eside kangakanani ukuba umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ususe inkathi endala bese umisa izulu kanye nomhlaba omusha? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
88. Umsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yomusa wadonsa iminyaka eyizi-2,000, futhi kuzothatha isikhathi eside kangakanani ukuba umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zo…
Yize manje sekuyizinsuku zokugcina, yazi ukuthi "izinsuku zokugcina" yigama lenkathi: NjengeNkathi Yomthetho Nenkathi Yomusa, kushiwo inkathi, futhi kushiwo inkathi iyonke, kunokubalwa kweminyaka embalwa yokugcina nezinyanga. Kodwa izinsuku zokugcina zehluke kakhulu kuneNkathi Yomusa neNkathi Yomthetho. Umsebenzi wezinsuku zokugcina awenziwa kwa-Israyeli, kodwa kubantu Bezizwe; kuwumsebenzi wokunqoba ophambi kwesihlalo Sami sobukhosi sezinhlanga zonke kanye nabo bonke abantu abangaphandle kwakwa-Israyeli, ukuze ukukhazinyuliswa Kwami emhlabeni jikelele kugcwalise umkhathi uwonke. Lokho kwenzelwa ukuthi ngidunyiswe kakhulu, ukuze zonke izidalwa zasemhlabeni zikwazi ukudlulisela udumo Lwami ezizweni zonke, ingunaphakade ezizukulwaneni, futhi zonke izidalwa zasezulwini nasemhlabeni zingakwazi ukubona ukukhazimula engikuthole emhlabeni. Umsebenzi owenziwa ngezinsuku zokugcina ungumsebenzi wokunqoba. Akusikho ukuholwa kwezimpilo zabo bonke abantu emhlabeni, kodwa kuwukuphetha ukungashatshalaliswa kwesintu, ukuhlupheka kwezigidi zeminyaka kwasemhlabeni. Ngenxa yalokho, umsebenzi wezinsuku zokugcina ngeke ube njengalowo weminyaka eyizinkulungwane kwa-Israyeli, noma njengomsebenzi waseJudiya weminyaka eyishumi owaqhubekela kweminye iminyaka eyizinkulungwane kwaze kwaba ukuthatha isimo somuntu kukaNkulunkulu okwesibili. Abantu bezinsuku zokugcina babhekana nokuvela kabusha koMhlengi enyameni, futhi bathola umsebenzi namazwi kaNkulunkulu ngqo. Angeke kube iminyaka eyizinkulungwane ezimbili ngaphambi kokuba kuphele izinsuku zokugcina; zimbalwa, njengesikhathi lapho uJesu enza umsebenzi Ngenkathi Yomusa eJudiya. Lokhu kwenziwa ukuthi izinsuku zokugcina ziyisiphetho sesikhathi somlando sisonke. Ziwukuqedelwa nokupheliswa kohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi kuphetha inkambo yempilo kanye nokuhlupheka kwesintu. Abadluliseli isintu sisonke enkathini entsha noma bavumele isintu ukuthi siqhubeke nokuphila. Lokhu kuyobe kungabalulekile ohlelweni lokuphatha Lwami noma ebukhoneni bomuntu. Uma isintu siqhubeka kanje; maduze nje sizobe sesizinikele ngokugcwele kuSathane, futhi leyo miphefumulo okungeyami ekugcineni izobe iphunyukile. Umsebenzi Wami uhlala iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi ngiyethembisa ukuthi ukulawula komubi esintwini sisonke nakho kuyoba ngokweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Ngakho, siphelile isikhathi. Angisaqhubeki futhi angisadebeseli manje: Ngezinsuku zokugcina ngizomnqoba uSathane, ngizobuyisela inkazimulo Yami, futhi ngizolanda imiphefumulo Yami emhlabeni ukuze le miphefumulo ekhathazekile ephunyuke olwandle lokuhlupheka, futhi lokhu kuzophothula umsebenzi Wami uwonke emhlabeni.
Okwedlule：Kungani umsebenzi kaNkulunkulu usindisa kuphela abantu abalungile futhi hhayi abantu ababi?
Okulandelayo：Umuntu angazithoba kanjani futhi ezwe umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ukuze athole insindiso?